Lakkoobsi namoota vaayiresii koronaan qabaman kan Ameerikaa keessaa miliyoona 1 caalee ennaa jiru kanatti bulchitoonni kutaalee Yunaayitid Isteetis hedduu tamsa’ina vaayiresichaa gab gochuuf uggura haaraa kaa’aa jiran.
Bulchaan kutaa Michigan Gretchen Whitmer manneen nyaataa ol seenanii nyaachuu, mana barnootaa daree seenanii barachuu, wal ga’ii uummataa, kasiinoo dhaquu fi mana tiyaatiraa dhaquu dhorkanii jiru. Mana dhuunfaa keessattis keessummoonni 10 caalan akka hin argamne labsanii jiru.
Whitmer tuuta oduuf isa kennaniin yeroo weerara hamaa keessa jirra jedhan. Haalli isaa "We are in the worst moment of this pandemic to date," Whitmer told reporters. Haalli isaa akkas hammaatee hin beeku. Qarqara afaan boollaa qarqara jirra waan ta’eef tarkaanfii fudhachuu qabna jedhan.
Torban darban keessa Yunaayitid Istees keessaa guyyaatti namoota 150,000tu haaraa vaayiresii kanaan qabamuu Yuniversitiin Joons Hopikins beeksisee jira. Ameerikaa keessaa namoota 246,000 ol COVID-19n du’aniiru.
Hayyoonni dhibee daariqaa ykn infekshinii kaleessa ibsa kennaniin prezidaant Doonaald Tramp filannoo kana Joo Baayiden injifachuu isaaniif beekkannaa kennuu dhabuun weerara kana dhaabsisuu kan gargaaran ragaalee ijoo ta’an angawoota Baayideniif akka hin dabarsine nu danqe jedhan.